ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပသွားမယ့် Samsung ရဲ့ event တစ်ခုကိုသိပြီးကြပြီလား ? – AsiaApps
ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပသွားမယ့် Samsung ရဲ့ event တစ်ခုကိုသိပြီးကြပြီလား ?
March 6, 2018 March 7, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်းပသွားမယ့် Samsung ရဲ့ event တစ်ခုကိုသိပြီးကြပြီလား ?
Samsung မတ်လ ၆ ရက်နေ့ (ဒီနေ့) ညနေ ၆ နာရီမှာ Galaxy S9၊ S9 Plus တို့ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်မယ့်အခမ်းအနား “Samsung Galaxy S9 ၊ S9+ Launch (To Watch Facebook LIVE)” ကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်သွားတဲ့လူတွေသာ သွားရောက်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် အခမ်းအနားကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ Facebook ကနေတဆင့် Live stream ပဲကြည့်ရှု့နိုင်မှာပါ။ Live လွှင့်မယ့်အချိန်ကိုတော့ Samsung ကဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Live ကြည့်မယ့်သူတွေကို Galaxy S9 Plus မဲဖောက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ကလည်းစောင့်ကြိုနေတာကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ Galaxy S9+ ကို ဖုန်းအရောင်းဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ shop.com.mm တို့မှာကြိုတင် order မှာယူနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဒါမှာယူနိုင်မယ့်အချိန်ကာလကတော့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၄ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး မှာယူနိုင်တဲ့အရောင်တွေကတော့ Midnight Black နဲ့ Lilac Purple တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Event စတင်မယ့်အချိန်ကတော့ ၃ နာရီလောက်သာလိုတော့ပါတယ်။ Samsung Brand New ဖုန်းအသစ်ကြီးကြည့်ရှု့နိုင်ဖို့နဲ့ Galaxy S9+ ကံစမ်းနိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အခုပဲဖုန်းဘေလ်ပြေးဝယ်သင့်ပါပြီ။ ?
ပါဝင်ကံစမ်းချင်သူတွေအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကတော့ ?
Events, local, Samsung
Huawei P20, P20 Pro နဲ့ P20 Lite တို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေထွက်ရှိလာပြီ
ဓာတ်ပုံတိုင်းကို လှပပြီး ထူးခြားတဲ့ ပုံတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမယ့် Adobe Lightroom CC